Flash Mob | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » Flash Mob
Posted by nigimi77 on Dec 26, 2011 in Cultures | 31 comments
Flash Crowd + Smart Mob = Flash Mob
Flash Mob ဆိုတာ email နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက် ၊ အချိန် ၊ ကြိုတင်ပြီး ချိန်းဆိုထားတဲ့ နေရာမှာ
လူတွေ စုစည်းပြီး ၁၀ မိနစ်လောက်တောင် မကြာတဲ့ အချိန် အတွင်းမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လှုပ်ရှားမှု တစုံတရာကို ပြုလုပ်ပြီးနောက်
တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး လူစုခွဲလိုက်ကြတဲ့ လူစုလူဝေး…ဒါမှမဟုတ် အဲဒီလို အပြုအမှုမျိုး လုပ်ဖို့ အတွက်ကို ဒီဇိုင်း ထုတ်ထားတဲ့
အဖွဲ့ လို့ ခေါ်နိုင်တယ် ။
အမေရိကန် နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ ကနေ အစပြုပြီး ဒယ်လက်စ် ၊ ဘော်စတွန် ၊ ဆန်ဖရန်ဆစ်စကို အစရှိတဲ့ မြို့ များ အပါအ၀င်
အီတလီ မှာရှိတဲ့ ရိုးမား ၊ ပြင်သစ်က ပါရီ ၊ အင်္ဂလန်က လန်ဒန် ၊ အော်ဇီက ဘီန် ၊ ဂျာမနီက မွီးနန်း (Munich) အစရှိတဲ့
ဥရောပ နိုင်ငံတွေ အထိပါ ကူးစက် ပြန့် နှံ့ လာခဲ့တယ် ။
Flash Mob ဟာ မိမိကိုယ်ကို ” Cultural Industries Practitioner ” ရယ်လို့ကြွေးကြော်ဖွင့်ဟလာတဲ့ အမျိုးသား
တစ်ယောက်ကနေ စတင်လာခဲ့တယ် ။ သူဟာ ၆ လပိုင်း ပထမ အပါတ်ရဲ့နေ့ တနေ့ မှာ သူ့ ရဲ့ မိတ်ဆွေ အယောက် ၅၀ ဆီကို
မေလ်း ပို့ ပြီး ဘရော့ဝေး မှာ ရှိတဲ့ Trinkets point မှာ လူစုကြဖို့အကြောင်းကြားခဲ့တယ် ။
သို့ သော်လည်း ဒီ အကြိုပွဲကို ရဲ အဖွဲ့ က သိရှိသွားပြီး အထမမြောက်ခဲ့ဘူး ။
အဲဒီနောက်တော့ ၁၀ ရက်ကနေ ၂ ပါတ်ကြာလောက် အတွင်းမှာ နယူးယောက်မြို့ တွင်း နေရာ အတော်များများမှာ Flash Mob
လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတော့တယ် ။
လှုပ်ရှားပုံ နည်းစနစ်ကတော့ အလွန်ကို ရိုးရှင်းတယ် ။ ဘီလ် ဆိုတဲ့ လူဟာ သူ့ မိတ်ဆွေတွေဆီကို Flash Mob လှုပ်ရှားမှုမှာ
ပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ် ဆိုတဲ့ email ကို ပို့ လိုက်ပြီး သူ့ မိတ်ဆွေတွေကမှ တဆင့် သက်ဆိုင်ရာ မိတ်ဆွေတွေဆီကို ပြန်ပြီး
Forward လုပ်ခဲ့တယ် ။ ချိန်းဆိုတဲ့ နေရာ သတင်းပေါက်ကြားမှုကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် သတ်မှတ်နေရာ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့
အရက်ဆိုင်တချို့ မှာ ပထမ အဆင့်အနေနဲ့လုစုဝေးဖို့စီစဉ်ကြတယ် ။
အရက်ဆိုင်တွေမှာ စုမိကြတဲ့ လူတွေဟာ အင်တာနက်ဆိုဒ် Time Zone ရဲ့အချိန် နာရီ အတိုင်းကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး လာကြတယ် ။
ချိန်းဆိုထားတဲ့ လူတွေကို ခွဲခြားနိုင်အောင်လို့ အထူးပြု ၀တ်စုံ ကို ၀တ်ဆင်လာတဲ့ လူက ရိုးစင်းတဲ့ ညွှန်ကြားချက် နှင့် တကွ
လူစုဝေးခြင်း နဲ့လူစုခွဲခြင်း အချိန်ကို ရေးမှတ်ထားတဲ့ Card တွေကို လှုပ်ရှားမှုကို တက်ရောက်ကြတဲ့ လူတွေကို ဝေငှတယ် ။
လှုပ်ရှားမှုကို တက်ရောက်ကြတဲ့ လူတွေဟာ အဲဒီ Card ထဲမှာ ပါတဲ့ အချက်အလက် အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရုံပါပဲ ။
ဒါပေမဲ့ လူစုခွဲရမဲ့ အချိန်ကို လုံးဝ လိုက်နာဖို့လိုအပ်သလို လူစုခွဲရမဲ့ တည်နေရာဟာလည်း တူညီနေလို့မဖြစ်ပါဘူး ။
ပထမဆုံး လှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ် ပျက်ခဲ့တဲ့ နောက်မှာ ဒုတိယမြောက် လှုပ်ရှားမှုကို 34 Avenue မှာရှိတဲ့ Macy’s Department store
ရဲ့Carpet store အရှေ့ မှာ ဖြစ်ပေါ် လှုပ်ရှားခဲ့တယ် ။ လူ အယောက် ၁၀၀ ရှိတဲ့ တက်ရောက်သူတွေဟာ Love Rugs ကို လာဝယ်ကြတဲ့
လူစုလူဝေးကြီး ပုံစံမျိုး ဖန်တီး လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ လုစုခွဲပစ်လိုက်ကြတယ် ။
တတိယ အကြိမ်မြောက်ကိုတော့ အယောက် ၂၀၀ ရှိတဲ့ လူတွေဟာ Park Avenue မှာ ရှိတဲ့ Hyatt Hotel ၂ ထပ်မြောက် Lobby ကို သွားရောက်
ပြီးတဲ့ နောက် အတိုင်အဖောက်ညီစွာ ၁၅ စက္ကန့် လောက် လက်ခုပ်တီးကြပြီး နောက်မှာ လျင်မြန်စွာ လူစုခွဲလိုက်ကြတယ် ။
စတုထ္တမြောက် စုစည်းမှုကိုတော့ အဆင့်အတန်းမြင့် Boutique Street အနေနဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ နေရာမှာရှိတဲ့ ဈေးကြီး ဖိနပ်ဆိုင် မှာဖြစ်တယ် ။
အယောက် ၂၅၀ ရှိတဲ့ လူစုလူဝေးကြီးဟာ Maryland ကနေ လာတဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ ပုံစံမျိုး ဖန်တီးပြီး ဖိနပ်ဆိုင်ကို လှည့်ပတ်ပြီး နောက်မှာ
ရုတ်ချည်း လူစုခွဲလိုက်ကြတယ် ။ ဘီလ် က စတင်လိုက်တဲ့ နယူးယောက်မြို့ ရဲ့Flash Mob ဟာ Blogger တွေရဲ့ ဖြန့် ကျက် မိတ်ဆက်မှုနဲ့ အတူ
အင်တာနက်ကနေ တဆင့် လျင်မြန်တဲ့ နှုံးနဲ့ပြန့် နှံ့ သိရှိသွားခဲ့ကြတယ် ။ ဆန်ဖရန်ဆစ်စကို ၊ ဘော်စတွန် အစရှိတဲ့ မြို့ တွေမှာလည်းပဲ သေချာပေါက်ကို
Central Park ရဲ့” အသံသစ် စုဝေးမှု ” စတင်ခဲ့တဲ့ နေ့ မှာပဲ အီတလီက ရိုးမား မှာလည်းပဲ အယောက် ၃၀၀ ရှိတဲ့ လူစုလူဝေးကြီးဟာ
Shopping Mall အထဲကို ၀င်ရောက်ပြီး အဲဒီမှာ လုံးဝမရှိတဲ့ ပစ္စည်းကိုပဲ မေးမြန်းတဲ့ Flash Mob လှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ် ။
Flash Mob ဆိုတာဟာ Flash Crowd ဆိုတဲ့ ရုတ်တရက် လူတွေ စုစည်းတဲ့ အခြေအနေ ဆိုတဲ့ စကားနဲ့Smart Mob ဆိုတဲ့ အတူလုပ်ကြတဲ့
လူစုလူဝေး ဆိုတဲ့ စကား ၂ ရပ်ကို ပေါင်းစည်းပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ ကနေ စတင်ခဲ့တယ် ။
အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ အပျော် သက်သက်ပါပဲ ။
ကျွန်တော်လည်း ရုတ်တရက် Flash Mob လုပ်ကြည့်တာပါ ။
အဲ့ဒီလူစုလူဝေးအကြောင်းလေး နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင် ဒရာမာ ဟာသကားလေး တခုမှာ ကြည့်ဖူးတယ်..
မင်းသားက မင်းသမီးကို အဲ့လို လူစုလူဝေးလေး လုပ်ပြီး အဲ့ဒီလူတွေ အလယ်မှာ တောင်းပန်ပြီးလည်သွားတာ ..ဇာတ်ကားနာမည်တောင် မေ့နေပြီ…ပြီးတော့ သူ့လမ်းသူသွားပြီး ကိုယ်ယောင်ဖျောက်သွားကြတာ အခုမှပဲ ဇာတ်ရည်လည်တော့တယ်….
” အကြောင်းအရာသစ်လေးကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ မျှဝေတဲ့ ကိုတပ်မ ၇၇တယောက် လာမဲ့နှစ်သစ် မှာ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံကာ လိုအင်ဆန္ဒတွေ တလုံးတ၀ထဲ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်”
လူမုန်းများတဲ့ ကျွန်တော့် အတွက် နွေးထွေးပြီး မင်္ဂလာရှိတဲ့ ဆုမွန် လက်ဆောင်အတွက်
ကိုရင် နိဂိမိ ကို လူမုန်းမများပါဘူး။
ကိုရင်ပါ ကသာ လူမုန်းများဘူး ပြောနေတာ
ဟိုး အပေါ်မှာ Pooch ရဲ့ကွန်မန့် ကို ကြည့်ဦး
သူခမျာ နိဂိမိ ကို ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်လို့ 
ဘယ်က အလေနတော ၊ ဂန်ဒူး ၊ ဂျီပုံး ၊ တွမ်ဘွိုင်း ၊ ကုန်းကုန်း က
အသလွတ် လက်သီးပုန်း အနီကတ် ပေးလိုက်လဲ မသိဘူး ။
ဟောဟော ပြောရင်း ဆိုရင်း ကိုရင်ပါ ကွန်မန့် ပါ နီသွားပြီ ။
ဟေ့…..အခြောက်မ ၊ ဘောပြားမ ၊ ၀က်မ
ပေါ်တင်ပြောလိုက် ဘယ်သူလဲ ဆိုတာကို ။
၀င်လဲ ဖတ်သေး လက်သီးပုန်းလည်း ထိုးသေး ။
နီချင်နီ စိမ်းချင်စိမ်း သဘောပဲ ။
မများဘူးလို့ သာ ပြောတာဗျ။
မဟုတ်ရင် ပျင်းစရာကြီး။ :D:D
ဟေ့လူကြီး တပ်မ ၇၇ ဘယ်သူက ကိုရင့် ခုနစ်ဆယ့်ခွန်ကို
ကျနော် ကြိုတင် ဟောကိန်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်…
ကိုရင့်ရဲ့ လူချစ်လူခင်များစေတဲ့ တက်တူးတွေကို
နီဂိမိ ၇၇ က ကျနော် ကြိုက်တဲ့ ဂေဇက်က
ဖတ်လဲ မဖတ်ဘဲ နဲ့။
သိသင့်တဲ့ဗဟုသုတပါပဲ။ ကျုပ်လဲ အခုမှ သိတယ်။
အင်တာနက်ရဲ့လားရာကိုလဲ စိတ်ထဲ ရေးရေး မြင်မိနေတယ်။
ဂတုံး အလကား တုံးပေးဦးမှာ တဲ့ဗျ
တပ်မ ၇၇ ဆိုတာ ခင်ဗျားလား
မေးစရာလေးရှိလို့ ခဏလောက် လိုက်ခဲ့ပါ
ကျုပ်အကောင်ခပ်သေးသေးတုန်းကတော့ ကျုပ်နဲ့ အဖွဲ့တွေ
ရွာထဲက နတ်ဂဒေါ်အိမ် ဂဲနဲ့ထုပြီးထွက်ပြေးဘူးတယ်
ဒီသဘောလေး ဖေ့စဖုတ်မှာ ခေတ်စားနေတယ်ထင်တယ် ( အထင် )
ဒီအကြောင်းတွေပြောရင် အီဂျစ်တော်လှန်ရေးတွေထိ ရောက်သွားနိုင်တယ်
ရပ်ကွက်လူကြီးတစ်ယောက်ယောက် သေတဲ့ မသာအိမ်မှာ လူစုပြီး ဖဲရိုက်ကြမယ်
အနီရောင်တွေ ဝေ….ဆာာာာာာာာာာာာ နေဒါဘဲ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှင်းဆီပန်းခင်းကြီးထဲ ရောက်သွားသလို
စာထဲမှာ မပြောလဲ အပြင်မှာ လာပြော
ရဲရဲတောက်တဲ့ ပိုစ့်ပါလား ဟ ရို့ ….
(တခြားဘက်မှာ လျှော့ပါ့မယ် သဂျီးရယ်… သည်မှာတော့ ပေါက်ကွဲခွင့်ပြဘာ…)
အနီကတ် သမားဒွေကို …
အေရိုး ဒွေ မွေနိုးဒွေ ….
ဖေတချယ် နိုးမတားဒွေ …..
အပုန်းတွေ …သတ္တိ မရှိဒဲ့ကောင်ဒွေ …
ခွေးမတား ဒွေ..ခွေးထီးတား ဒွေ …
ဒွေ …ဒွေ …
နေဂျမ်းဘာအုံး Comments ဒွေဂိုအဒူလိုက်နမ်းတွားဒါရဲ
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ .. ပို့စ်တခုလုံး ရဲရဲနီနေပါလားနော် ….. ။
ကဏန်းကြီးရေ… ရွာမေတ္တာခံယူထားပုံကလည်း အံ့မခန်းပါလားနော် … ။ သုံးယောက်လောက်က လုပ်နေတယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ် … ။
အပျော်သက်သက်စုရုံးကြတယ်ဆိုတာ .. တကယ်တမ်းတော့ လွယ်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော် .. ဘာလို့လဲဆိုတော့ .. အလုပ်အားတဲ့ လူတွေမှပဲ လုပ်နိုင်မယ့်ကိစ္စကိုး … ။ ရည်ရွယ်ချက် ဦးတည်ချက်မရှိပဲ .. လျှပ်တပြတ်လုပ်လုပ်နေတာထက်စာလျှင် .. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. မပြောတော့ဘူး … မပြောတော့ဘူး … ဟီး ။
( အိမ်မှာ အိပ်နေတာက ပိုကောင်းမယ်လို့ပြောတာပါ … )
ဟိုသီချင်းလေး ဖျတ်ကနဲ့ ဂေါင်းထဲ တန်းဝင်လာတာဘဲ
သူတို့ကအနီဆိုတော့ တို့ကလဲ အစိမ်းအင်အား ပြရသေးတာပေါ့
တစ်ယောက်တစ်စိမ်း လိုက်ပေးလိုက်ပြီ …
ကိုရင်နီဂိမိ ၏ ပို့စ်အား
ကျွန်ုပ်ဘလက်မှ ၀င်ရောက်အားပေး ကြည့်ရှုသွားပါကြောင်း။
အားလုံးသော ဆြာ ၊ ဆြာမ များ ခွင့်လွတ်ပါ ။
ရွံဖို့ ကောင်းလောက်အောင် စိမ်း နေတယ် ။
ကျွန်တော် လိုချင်တာ အနီ….. ဒါမှမဟုတ်….. အစိမ်း…… မဟုတ်ပါဘူး ။
အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အရောင်ပါ ။
မီးပွိုင့်ပို့စ် လို့ နာမည်သာ ပြောင်းလိုက်ပါတော့လား
တစ်ကယ် စိမ်းလိုက် နီလိုက်
သဂျီး reverse ဂါထာ ရွတ်လိုက်တယ်လို့ ကျုပ်ထင်တယ်ဗျ….
ကျုပ် ဆဲဆိုပီး သကာလ …..နောက်တယောက်ယောက်က အနီတွေများလို့
(ဘပုထင်တယ်…ပန်းနီနီ ၀င်မန့်တော့ …) ကျုပ်ဝင်ကြည့်တာ…အကုန်စိမ်းနေတယ်…
ကိုယ့်မျက်လုံးကိုယ်မယုံနိုင်အောင် ….မိုင်းနပ်စ်ဖိုက် ထိထားတဲ့ ကျုပ် ကွန်းမန့်က ပလပ်စ်၅
ဖြစ်နေတာကိုး (ယခု ပလပ်စ် ၆)
တိုက်၂ဆိုင်၂မို့ ကျုပ် ဒါလေးကို မြင်တွေ့သွားခဲ့တာကို ကိုရင့်ကို ဖောက်သည်ချတာပါနော….
သည်လိုဆိုရင် အဖြူရောင်ဆိုးထားတဲ့ …လှည့်ဖျားမှုလေးတခုအတွက် ကိုရင် စိတ်ကျေနပ်မလားဟင်င်င်။။။
သဂျီးဆိုတဲ့ အဲဒီ ဖောသွတ်သွတ် မျက်နှာနဲ့လူဂျီးက ဘယ်တော့မှ လက်သီးပုန်း
ချွေးမသိပ်ဘူး …သေချာတာကတော့ စ်ိမ်းပေးတာ သူမဟုတ်ဘူး
လူဆိုတာက အချိုကြီးပဲ စားရတာကြာရင် အစပ်ကလေး စားချင်မှာပဲ
လဇာဂီရေ …နင်က စပ်တော့စပ်ပေမဲ့ သေချာပေါက် ထိထိမိမိ အရသာကို
ပေးတဲ့ ကုလားအော် ဟဲ့
ငါက စပ်ပါတယ်ဆိုမှ မှိုကလေး နည်းနည်း ၊ ယင်ဥကလေး နည်းနည်း ၊
နှစ်ချို့ ကလေး နည်းနည်း ၊ ဆိုးဆေးကလေး နည်းနည်း ၊ အမှိုက်ကလေး နည်းနည်း
နဲ့စပ်သလိုလို မစပ်သလိုလို ဟာမျိုး ဆိုတော့ မစားကောင်းတဲ့ အသီး စာရင်းထဲမှာ
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငရုတ်သီးရဲ့သဘာဝအရ ငါ့ကြောင့် နည်းနည်းလေး စပ်သွားတယ်
အိပ်ချင်ပြေသွားတယ် ဆိုရင်ပဲ ငြုပ်သီးမှိုတက် ဖြစ်ရကြိုးနပ်ပါသဗျား ။